Tiorkemenistana: Mamarana Ny Fanaovan’ny Fanjakana Ampihimamba Ny Fiverenan’Ilay Tambajotranà Finday Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jona 2012 0:42 GMT
Finday avy amin'i Johnathan Lyman (CC BY-NC-ND 2.0)
Tamin'ny voalohandohan'ny Mey, nibitaka ireo mponina ao Tiorkemenistana mpampiasa aterineto rehefa nahafantatra fa taorian'ilay fifanekena am-bava nataon'ny Filoha Gurbanguly Berdimuhamedov, hamerina ny asany any Tiorkemenistana ilay tambajotranà finday Rosiana malaza MTS, taorian'ilay fikatonana tsy naraham-panazavana nataon'ny governemanta tamin'ny 2010.
Niditra ny raharaham-barotra ao Tiorkemenista ny MTS tamin'ny 2005 taorian'ny nahazoany anjara toerana goavana tanatina orinasa Amerikana izay tambajotranà finday lohandohany tao amin'ny firenena. Vetivety teo dia lasa tambajotra mivalampatra sy nahita fahombiazana be indrindra tany Tiorkemenistana ilay orinasa Rosiana, mitana ny 85 isanjaton'ny raharaham-barotranà finday ao amin'ny firenena ary manome tolotra ho an'ireo mpampiasa finday 2.4 tapitrisa tamin'ny 2010 [ru].
Ankilan'izany, tsy nahazo afa-tsy mpanjifa miisa 500.000 fotsiny ilay tambajotranà finday an'ny fanjakana ao Tiorkemenistana Altyn Asyr, tamin'ny lohandohan'ny taona 2011. Nalaza tokoa ireo tolotry ny MTS tao amin'ny firenena noho ny fanomezan'ny tambajotra aterineto amin'ny finday ho an'ireo mpanjifany, isan'izany ny media sosialy izay voararan'ny mpanome aterineto sahanin'ny fitondrana. Marina tokoa, lasa ‘varavaran-kely misokatra mankany amin'izao tontolo izao’ ny fidirana aterineto nomen'ny MTS ho an'ireo mponina maro ao Tiorkemenistana .
Na eo aza anefa izany, nisintona ny fahazoan-dalànan'ny MTS handraharaha tamin'ny Desambra 2010 ny Minisitry ny Fifandraisana ao Tiorkemenistana, tsy nanome ny antony. Nisy fiantraikany goavana teo amin'ny antsasaky ny mponina manodidina ny dimy tapitrisa eo ho eo ao anatin'io firenena io ny fampiatoana ny tolotra taorian'izany. Vitsy ny mponina no nanana safidy ankoatra ny hifindra any amin'ny Altyn Asyr. Tsy ela dia nisedra fahatapahana ireo tolotra maro tamin'io orinasam-panjakana io noho ny ny fotodrafitrasany tsy vonona ho amin'ny fitobahan'ireo mpanjifa maro fahiny avy amin'ny MTS teo aloha.
Tsy mahagaga araka izany ny fandraisana makotrok'ireo mpampiasa aterineto tamim-kafanana tanteraka ny vaovao milaza ny famerenana ny fandraharahan'ny MTS ao Tiorkemenistana.
Taorian'ilay tatitra tanaty vaovao tao amin'ny Asgabat.net momba ny fiverenan'ny MTS ao amin'ny firenena, nitsikera i Dom-kuhnya [ru]:
Oeeeeeh! Arahabaina! Ny fifaninanana [anivon'ireo mpanome tolotra] dia midika ho fahafahana mifandray tsara kokoa.
Mpamaky iray hafa, Anastasiya, nanampy [ru]:
Vaovao mahafinaritra! Mety ho mbola tsara kokoa aza izany raha namerina ny laharanay taloha izy ireo.
Tsy dia liana loatra tamin'ilay vaovao i Krutoy, manoratra [ru] am-panesoana:
Wow! Miverina ireo mpangalatra!
Izay novalian’i Vladimir [ru]:
Maninona no mankarary ny loha na mangalatra izy ireo na tsia. Mihevitra ve ianao fa tsy mangalatra ny Altyn Asyr ?! Mangalatra ny olon-drehetra! Tsy mino aho fa mbola misy olona tsotra fanahy sy marina.
Namarana i Leyla, mpianatra izay izay mianatra any ivelany [ru]:
Hanana fahafahana hiresaka amin'ireo ray aman-dreniko ihany aho amin'ny farany. Any Tiorkemanistana, samy manalika na ny tolotranà finday amin'izao fotoana na ny tolotranà telefaonina mampiasa tariby.